Isiseko esitsha se-Kailong esigubungela ngaphezulu kwe-70000 yeemitha zesikwere kukwakhiwa kwe-uner kwaye kuya kusebenza ngoJuni 2022.
UMZEKELO WESIXHOBO NESIQINISEKISO
Izixhobo zePateni ye-Wax iyimfuneko kulo lonke utyalo-mali. Isixhobo senziwe nge-aluminium yodidi oluphezulu, kwaye siyilelwe ukwamkela ukuhamba kwe-wax etyhidiweyo phantsi koxinzelelo olukhulu, ukuyivumela ukuba yomelele kwipateni ye-wax esetyenziselwa ukwenza isikhunta se-ceramic ngexesha lokutyala imali ...
Utyalo-mali lukwabizwa ngokuba "kukuphosa ngokuchanekileyo" okanye "i-silica sol casting" okanye "ukulahleka kwe-wax ukulahla" okanye "ukulahla i-wax". Izinto zokuphosa zinokusetyenziswa ngokubanzi, kwaye akukho mda kubume bemveliso kunye nolwakhiwo oluntsonkothileyo. Okona kuthenga ngaphandle ...
UYILO ISIKHOKELO & unyamezelo
Eyona mpumelelo yoyilo loyilo luxhomekeke kunxibelelwano phakathi komyili kunye neenjineli ezisisiseko. Xa isiseko sazisiwe ngokufanelekileyo malunga neemfuno zesahlulo, kuhlala kukho ukungqinelana kweenkcukacha eziya kuthi zivumele ukuthotyelwa okuphezulu ukuze kuprintwe ...
IComprifugal Pump Impeller, Impompo yamanzi Impompo, Impompo yentsimbi engenazingcingo, Impompo yokuPhosa, Ityala lempompo, Icandelo loomatshini,